Riandranon'i Sekumpul, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Rivotra miafina
Ny fijerin'ny riandrano Sekumpul
Haavo - 70-80 metatra
Raha ny marina, ny Sekumpul dia be dia be amin'ny riandrano 7. Any avaratr'i Bali, eo akaikin'i Singaraja sy Lovina. Ireo riandrano ireo dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra eto amin'ny nosy.
Ny rano avy amin'ny 70-80 m. Tsy maintsy miakatra amin'ireto riandrano ireto ianao amin'ny alàlan'ny ala. Mizotra manaraka ny tanimbary sy ny tanimbary eo an-toerana ny lalana. Teny an-dalana, hahita sehatra fitadiavana toerana ianao mba hahitana tsara ny riandrano.
Amin'ireo riandrano 7 amin'ny Sekumpul 2, ny 30 ihany no mahazo mitsidika.Mahodidina ala mikitroka azy ireo. Izy io dia lena sy mangatsiaka foana, akaikin'ny riandrano. Fiparitahan'ny rano mihanaka miparitaka amin'ny radio mandre. Na dia amin'ny XNUMX metatra miala ny riandrano aza dia mahazo mando haingana be ianao.
Misy gazebos maro any akaiky eo, izay ahafahanao mankafy ny riandrano. Fa tsy misy fitaovana hafa intsony, tsy dia mandroso loatra ny fotodrafitrasa eto. Na izany aza, eny an-dalana dia misy ny mpivarotra mivarotra voankazo, zava-manitra ary kafe. Manakaiky ny riandrano misy tanàna kely misy kafe sy trano fisakafoanana miasa amin'ny sakafo Indonezia sy kafe Luwak.
Satria somary kely ny lazan'ireo toeram-pisotroana any Bali avaratra, ary ela loatra vao tonga any Sekumpul avy any amin'ny faritra afovoany sy atsimon'ny nosy, dia azo antsoina hoe mangina ity toerana ity. Tsy misy mpizahatany marobe eto. Saingy, vondrona misy mpitsidika hatramin'ny 10 indraindray no hita. Ny saram-pidirana dia 15 000 ropia. Sekumpul dia azo tratra avy amin'ny tanàna roa - Lemuki sy Sekumpula.
adiresy: Sekumpul, Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali 81171, Indonezia
Tapakila fidirana - 15 000 ropia
Sarin'ny riandrano Sekumpul
riandrano Sekumpul eo amin'ny sari-tany
Riandranon'i Sekumpul amin'ny sari-tany
Marina ny anao. Ary ny iray amin'ireo tombony azo dia ny elanelana lavitra amin'ny lalan'ny mpizahatany.
Ny mpizaha tany dia afaka manary ny habakabaka izay mahasarika voajanahary.